Ny Omega Drill an'ny Israeliana dia manao simulation ny fipoahan'ny valan'aretina COVID-19 vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Israel Vaovao Vaovao » Ny Omega Drill an'ny Israeliana dia manao simulation ny fipoahan'ny valan'aretina COVID-19 vaovao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • People • tompon'andraikitra • News sustainability • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny Omega Drill an'ny Israeliana dia manao simulation ny fipoahan'ny valan'aretina COVID-19 vaovao.
Noderain'ny biraon'i Bennett ho voalohany eran'izao tontolo izao, ny lalao dia mijery ny fiomanana amin'ny famerana amin'ny ho avy amin'ny fivoriam-be sy ny hetsika, ny quantine ary ny politika fanakatonana, ary koa ny fitiliana fanaraha-maso sy fampitandremana havoaka rehefa misy variana vaovao mivoatra. Ny fanazaran-tena ihany koa dia mitsapa ny valin'ny hopitaly, ary koa ny fiomanana amin'ny sehatra hafa.
Nambaran'ny praiminisitra Naftali Bennett tao amin'ny Twitter ny simulation tamin'ny alarobia.
Bennett dia nanondro matetika ny 'Omega strain' mba hamaritana ny fiovan'ny viriosy manaraka izay mbola tsy hita.
Ny fanazaran-tena notarihan'ny minisitry ny fiarovana sivily Israeliana dia natao tao amin'ny efitranon'ny toe-draharaha ao amin'ny Foibem-pirenena momba ny fitantanana ao Jerosalema.
Ny governemanta israeliana dia nanambara ny fandefasana fanazaran-tena manerana ny firenena amin'ny endrika 'famerenan'ny ady' hanombantombana ny fahavononan'ny firenena amin'ny fihanaky ny aretina vaovao tsy fantatra amin'ny otrikaretina COVID-19.
Isiraely's Praiminisitra Naftali Bennett, izay niresaka matetika momba ny mutation viriosy manaraka, mbola tsy hita, ho 'Omega strain', dia nanambara ny fanazaran-tena nomena anarana hoe 'Omega drill' tamin'ny alarobia.
Ny fanazaran-tena notarihan'ny minisitry ny fiarovana sivily Israeliana dia natao tao amin'ny efitranon'ny toe-draharaha ao amin'ny Foibem-pirenena momba ny fitantanana ao Jerosalema. Ny fanazaran-tena dia mametraka ny andrim-panjakana sy ny sampan-draharaham-panjakana amin'ny dingan'izy ireo hahitana raha ho vitany ny hiatrika ny "varian'ny COVID-19 vaovao mahafaty."
"Raha any amin'ny toerana sasany eto amin'izao tontolo izao dia miharatsy ny toe-draharaha amin'ny coronavirus, milamina sy azo antoka ny Isiraely," hoy i Bennett. "Mba hitazonana izany, sy hanohizana ny fanao isan'andro, dia tsy maintsy mitazona ny rantsan-tànantsika amin'ny pulse isika ary miomana amin'ny toe-javatra rehetra."
The Praiminisitra nidera IsiraelyNy valin-tenin'ny valan'aretina, nanambara fa ny fanjakana dia "tena tsara tarehy" rehefa nandresy ny onjan'ny areti-mifindra fahaefatra, ary nampiany fa "eo amin'ny sisin'ny handao ny Delta [variant]."
Isiraely lasa iray amin'ireo firenena voalohany namoaka tetika vaksiny booster tamin'ny fahavaratra, nanomboka tamin'ny mponina be taona ary niasa tamin'ny sokajin-taona hafa. Nidera an'io tetika io i Bennett, ary nanambara fa “mpisava lalana ny fatra fahatelo” manohitra ny COVID i Israely.
Ny Drill Omega an'ny Isiraely dia manao simulation ny fipoahan'ny tebiteby COVID-19 vaovao - Amin'ny ran'ny Zanak'ondry hoy:
November 28, 2021 amin'ny 15: 22